𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 𝟭) - The Khant Digital
1. “WordPress Is Powering 37% Of The Web”
ဒီအချက်က အနည်းငယ်တော့ အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ တစ်ကယ်ရော ဟုတ်ပါ့မလားလို့တွေးထင်မိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အမှန်ပါဘဲ။ ယနေ့ခေတ်လို Digital Era မှာ နာမည်ကြီးကျော်ကြားလူကြိုက်များလှတဲ့ Brands တွေ၊ Companies ကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ Websites များအတွက် WordPress ကို အဓိကထားပြီး အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ WordPress က WordPress.org , WordPress.com , WordPress Multisite စတဲ့ Variations များစွာနဲ့ Powerful ဖြစ်တဲ့ Content Management System တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Corporations တွေက ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Websites များနဲ့ Web များအားလုံးရဲ့ 37% ထက်ပိုတဲ့ပမာဏကို WordPress က ထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကလည်း Personal Blogs များ၊ Small Business များရဲ့ Websites များကစလို့ Sony Music , Microsoft , The Walt Disney Company , The Forbes Blog စတဲ့ Fortune 500s ( Fortune 500 ဆိုတာ အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ 500 Largest Companies များစာရင်းဖြစ်ပါတယ်။နှစ်စဉ်ရရှိတဲ့ အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး FORTUNE magazine ကထုတ်ပြန်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်) နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများရဲ့ Websites များအတွက်ပါ WordPress ကဘဲ ထောက်ပံ့ပေးနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
2. “Users Makes 70 Million New Posts and 77 Million New Comments Each Month”
WordPress ကိုအသုံးပြုနေကြသူ Users များအားလုံးရဲ့ တစ်မိနစ်စီတိုင်းမှာ Update လုပ်ကြတဲ့ စုစုပေါင်း Post အရေအတွက်က ပျှမ်းမျှအားဖြင့် 1,620 ကျော်ပါတယ်။ ဒါအပြင် တစ်နာရီကို 97,222 Posts၊ တစ်ရက်အတွင်းမှာ Posts စုစုပေါင်း 2,333,333 (2 သန်းကျော်) နီးပါး Update လုပ်ကြပါတယ်
Update လုပ်ကြတဲ့ Post တစ်ခုချင်းစီမှာ စာလုံးရေက ပျှမ်းမျှ 300 ၀န်းကျင်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် WordPress ကိုအသုံးပြုပီး တစ်မိနစ်စီတိုင်းမှာ စာလုံးရေ 500,000 (ငါးသိန်း) နီးပါး တစ်နည်းအားဖြင့် သန်းတစ်၀က်နီးပါး ပြောဆိုဆက်သွယ်ဝေမျှနေကြပါတယ်။ ဒီ Data တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်၀န်းမှာ WordPress ကို အသုံးပြု‌နေကြသူအများအပြားရှိနေတာကို သိနိုင်မှာပါ။
3. “WordPress Gets 487 Billion Spam Messages Every Month”
သင်က WordPress Website ကို Log in ၀င်ပြီးတဲ့အခါ Akismet Stats ရဲ့ Overview ပုံစံကို မြင်ရမှာပါ Akismet က Caught လုပ်ထားတဲ့ Spam Comments များ‌ကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ Spam Queue ထဲမှာ သူတို့က အရေအတွက်ဘယ်လောက်များများရှိနေလဲ ဆိုတာကို အသေးစိတ် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ WordPress မှာ လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစလို့ Spam Comments ပမာဏက မြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။
တစ်လအတွင်းမှာ ရလာတဲ့ Spam Comments အရေအတွက်က Legitimate Comments များထက်ကို 6,200 ကျော်လောက် ပိုများပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် WordPress က ဘီလီယံ 480 ကျော်တဲ့ Spammers များရဲ့ Spam Comments များကို ရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Aksimet ကဒီလိုမျိုး Spammers များလက်ထဲကနေ 99.9% ထိကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
← Prev: Social Media Marketing ကို စီးပွားရေးမှာ ဘာ့ကြောင့် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးလာကြတာလဲ? Next: 𝗪𝗼𝗿𝗱𝗣𝗿𝗲𝘀𝘀 အကြောင်း သိကောင်းစရာ (𝗣𝗮𝗿𝘁 2) →